ကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်အကဲခတ် | နိုးလော့! ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၃
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ သတင်းမီဒီယာတွေကို ယုံကြည်နိုင်ပါသလား
သူတို့မြေ၊ သူတို့ဓလေ့ ဘရာဇီးသို့ အလည်တစ်ခေါက်
မိသားစုအတွက် အကူအညီ ကောင်းစွာ နားထောင်ပေးသူ ဖြစ်နိုင်ပုံ
၂၀၁၃ နိုးလော့! အတွက် အကြောင်းအရာအညွှန်း
ဒါဟာ သူ့အလိုလို ဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလား ဒီအန်အေရဲ့ အချက်အလက် သိုလှောင်နိုင်စွမ်း
တခြားသူတွေ ငါ့အကြောင်း အတင်းပြောရင် ဘာလုပ်ရမလဲ
ယောသပ်ကို ဖာရောဘုရင် ချီးမြှောက်
နိုးလော့! | ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၃
ဖတ်လို ကင်ယာဝန်ဒါ ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ကီရွန်ဒီ ခရိုအေးရှား ချက် ချီချေဝါ ချီတွန်ဂါ ဂရိ ဂျပန် ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယာ စင်ဟာလာ စပိန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် စီဘွာနို ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆားဗီးယား ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆွာဟီလီ ဆွီဒင် ဇူးလူး တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တီဂရင်ယာ တူရကီ တွီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နော်ဝေး ပန်ဂျာဘီ ပိုလန် ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဖင်လန် ဖီဂျီ ဘူလ်ဂေးရီးယား မာလဂက်စီ မော်လ်တီစ် မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရှိုစာ လင်ဂါလာ လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် အက်စတိုးနီးယား အက်ဖစ်ခ် အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဖရိက အာမေးနီးယား အာရဗီ အိုက်စလန် အီတလီ အီလိုကို အူရ်ဒူ အေးဝေး
လေ့လာမှုတစ်ခုအရ လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့သူတွေထဲက သုံးပုံတစ်ပုံ နီးပါးဟာ သီချင်းနားထောင်ရင်း၊ ဖုန်းပြောရင်းနဲ့ လမ်းကူးကြတယ်။ အန္တရာယ်အရှိဆုံး လုပ်ရပ်ကတော့ ဖုန်းနဲ့စာပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့စာပို့တဲ့သူဟာ ပုံမှန်လမ်းကူးတဲ့သူထက် အချိန်ပိုကြာတယ်။ မီးပွိုင့်ကို မကြည့်ဘဲကူးတာ၊ ဖြတ်ကူးရမယ့်နေရာက မဟုတ်ဘဲ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်ညာမကြည့်ဘဲ ကူးချင်တိုင်းကူးတာ ၄ ဆလောက် ပိုများတယ်။
နိုင်ဂျီးရီးယားကနေ ဥရောပကို လူကုန်ကူးခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဂျူးဂျူးနတ်ဆရာရှေ့မှာ ရိုးရာ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုကြရတယ်။ လူကုန်ကူးတဲ့သူတွေဟာ အဲဒီ အမျိုးသမီးတွေကို ချုပ်ကိုင်ဖို့နဲ့ လိင်ကျေးကျွန်တွေအဖြစ် စေခိုင်းတဲ့အခါ နာခံမှုရှိဖို့၊ မနာခံရင် ဝိညာဉ်လောက အပြစ်ပေးခံရမှာကို ကြောက်တဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ကို အမြတ်ထုတ်ကြတာဖြစ်တယ်။
ရေရှည်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသူ ၅ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကြားကလူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့တွေနဲ့ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတွေကို အလုပ်လျှောက်လွှာမှာ မထည့်တော့ဘူး။ ကိုယ်လျှောက်တဲ့ အလုပ်အတွက် သိပ်မြင့်လွန်းနေလို့ပါ။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ မီးခိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါကြောင့် တစ်နှစ်မှာ လူလေးသန်းလောက် သေဆုံးနေတယ်။ ဒီလိုသေဆုံးရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းက လေဝင်လေထွက်မကောင်းတဲ့ နေရာမှာ ထင်းမီးဖိုတွေသုံးလို့ ဖြစ်တယ်။ ထင်းမီးဖို ဒါမှမဟုတ် မီးသွေး မီးဖိုက ထွက်တဲ့မီးခိုးဟာ စီးကရက်မီးခိုးလိုပဲ သေစေတဲ့ ဓာတုအဆိပ်အတောက် ရှိတယ်ဆိုတာကို ပညာရှင်တွေပြောကြတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၃ | သတင်းမီဒီယာတွေကို ယုံကြည်နိုင်ပါသလား
နိုးလော့! ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၃ | သတင်းမီဒီယာတွေကို ယုံကြည်နိုင်ပါသလား